Ungasusa kanjani izincwadi kuma-iBooks ku-iPhone yakho naku-iPad | Ngivela kwa-mac
Abaningi benu sebevele bayazi ngoba niyisebenzisa kaningi, uhlelo lokusebenza iBooks kuyasiza kakhulu ukugcina izincwadi namafayela e-pdf endaweni eyodwa kufayela lakho le- iPhone noma i-iPad. Kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-iBooks, singavakashela iSitolo se-iBooks bese sithola futhi sithenge izihloko eziningi ezahlukahlukene, zombili ezakudala kakhulu nezisemqoka kakhulu. Kepha enye yezinkinga abasebenzisi abaningi ababhekana nayo indawo yokugcina yamadivayisi wabo, engagcwalisa ngokushesha okukhulu ngakho-ke, kungenzeka ukuthi ngaleso sikhathi isixazululo esingcono kakhulu susa izincwadi lokho sesikufundile. Ukuze senze lokhu kufanele silandele izinyathelo ezilandelayo.
Okokuqala, okunengqondo kakhulu futhi okusobala, vula uhlelo lokusebenza iBooks ku-iPhone noma i-iPad yethu. Sizokhetha ithebhu ethi "Izincwadi zami", engxenyeni engezansi kwesobunxele, bese sizocindezela u- "Khetha", engxenyeni engaphezulu kwesokudla.
Isinyathelo esilandelayo kuzoba ukukhetha zonke lezo zincwadi kanye / noma ama-pdf ukuthi sifuna ukususa kusuka kudivayisi yethu. Ukuze wenze lokhu, vele ubathinte ngamunye ngamunye. Uma usukwenzile lokho, chofoza ku- "Delete" phezulu ngakwesokunxele kwesikrini bese uqinisekisa kwimenyu ezovela.
Futhi yilokho kuphela. Ngendlela elula kakhulu futhi esheshayo uze ususe izincwadi obukade uzifuna iBooks futhi wenze indawo entsha. Futhi, uma ususa incwadi oyithengile ku-iBooks Store futhi ngokuhamba kwesikhathi ufuna ukuyengeza futhi, vele uvakashele isigaba esithi "Okuthengiwe" esitolo bese uqhafaza ku-Cloud ozothola eduze kwaso ukuze uyilande futhi.
Khumbula lokho esigabeni sethu Izifundiswa unawo wonke amathiphu namasu ahlukahlukene wawo wonke amadivayisi wakho we-Apple, imishini namasevisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac » Ungazisusa Kanjani Izincwadi kuma-iBooks ku-iPhone yakho naku-iPad
Angikwazanga ukukwenza, inganekwane ye-remove ayiveli
Izincwadi eziningi engizithenge mahhala zivela ohlwini oluthengiwe futhi azikufanele, futhi ziyaqhubeka nokungena endleleni. Ngisusa iningi labo futhi bayaqhubeka nokubonakala kumtapo wezincwadi (akusekho ukwehliswa, kepha njengokuthi "ukwehliswa")
Ngamanye amagama, engingathanda ukuthi, hhayi ukubasusa kuphela kudivayisi, kepha futhi kusuka kulo lonke uhlu
Kungenza ngifune ukubona izincwadi eziningi kakhulu engingasafuni ukuzifunda futhi ezihlale zibhalwe lapho